Ijazi Elingashintshwa Liwuhlobo
Ijazi Elingashintshwa Liwuhlobo Ijazi elingaba ngu-7-in-1 liphefumulelwe omama abasebenzayo abakhethelwe ikhabethe lendawo yansuku zonke eliyingqayizivele futhi elisebenzayo. Kuyo indwangu yakudala kodwa ethambekele futhi, eyenziwe ngendwangu ye-Scandinavia Rya Rug ihunyushwa kabusha ngendlela yesimanje ephumela ezingutsheni zoboya ezifakiwe ezinjengezimbobo ngokusebenza kwazo. Umehluko ngokuningiliziwe nobungani bezilwane nendawo ezungezile. Kuyo yonke le minyaka i-Eco Furs ihlolwe ezimweni zezulu ezahlukahlukene zasebusika eziye zasiza ekwakheni izimfanelo zaleli jazi nezinye izingcezu zakamuva zaba ukuphelela.
Lwesine 26 Meyi 2022
Izingubo EVietnam, sibona inqubo ye-bamboo lattice emikhiqizweni eminingi efana nezikebhe, ifenisha, amakheji enkukhu, izibani ... I-bamboo lattice inamandla, ayibizi, futhi kulula ukuyenza. Umbono wami ukwakha imfashini yokugqoka ejabulisa futhi enomusa, egqamile futhi ebukekayo. Ngisebenzise lemininingwane ye-bamboo lattice kweminye yemfashini yami ngokuguqula ithange elihlaza okotshani, eliqinile elinamandla libe izinto ezithambile. Imiklamo yami ihlanganisa isiko nefomu lesimanje, ubulukhuni bephethini le-lattice kanye nokuthamba kwesihlabathi ngezindwangu ezinhle. Ukugxila kwami kulelifomu nemininingwane, ukuletha ukuthandwa nobuhle kuya kogqokiwe.
Indandatho Yedayimane I-Isida iyindandatho yegolide engu-14K egeleza umunwe wakho ukudala ukubukeka okuhle. Indandatho ye-Isida indandatho ihlanganiswe ngezinto ezihlukile njengamadayimane, ama-amethysts, ama-citrines, ama-vevorite, ama-topazi futhi ahambisana negolide elimhlophe neliphuzi. Ucezu ngalunye lunokuqukethwe kwalo okucacisiwe, olwenza lube-ngolunye. Ngaphezu kwalokho, i-facade ecwebezelayo efana nengilazi ematshe ayigugu asikiwe ibonisa imisebe yokukhanya ehlukahlukene kuma-ambiances ahlukahlukene, engeza uhlamvu olukhethekile kwindandatho.
Umgexo Idizayini inendaba ebuhlungu emangalisayo ngemuva kwayo. Kwaphefumulelwa isibazi sami esingenakulibaleka emzimbeni wami esashiswa yimililo eqinile lapho ngineminyaka eyi-12. Lapho ngizama ukumboza nge-tattoo, umdwebi we-tattoo wangixwayisa ngokuthi kuzoba kubi ukwedlula lokhu ngokwesabisa. Wonke umuntu unesifo sakhe, wonke umuntu unendaba noma umlando wakhe ongalibaleki, isixazululo esingcono kakhulu sokulapha ukufunda ukuthi ungabhekana kanjani naso futhi usinqobe ngokuqinile kunokuba ufihle noma uzame ukubalekela kukho. Ngakho-ke, ngithemba ukuthi abantu abagqoka ubucwebe bami bangazizwa beqine futhi benethezekile ngokwengeziwe.
Icala Le-Laptop Icala le-laptop elinomucu okhethekile nelinye uhlelo lwecala. Okokuqukethwe ngithathe isikhumba kabusha. Kunemibala eminingana kusuka lapho wonke umuntu engathatha eyakhe. Inhloso yami bekuwukwenza icala elisobala, elithandekayo le-laptop lapho uhlelo olusha lokuzinakekela lukhona futhi lapho ungabopha khona elinye icala uma kufanele uphathe ukuze ukhiphe i-Mac book pro ne-Ipad noma i-mini Ipad nawe. Ungaphatha isambulela noma iphephandaba elingaphansi kwakho. Icala elinokuguquguquka kalula kwezidingo zansuku zonke.
Gamsei I-Cocktail Bar Sonto 26 Juni
Aix Arome Cafe I-Cafe Mgqibelo 25 Juni
Wuhan Pixel Box Cinema Cinema Lwesihlanu 24 Juni
Ijazi Elingashintshwa Liwuhlobo Izingubo Indandatho Yedayimane Umgexo Iwashi Elixhunyiwe Liwuhlobo Icala Le-Laptop